I-Firefox ne-LibreOffice: Uzisebenzisa kanjani izinguqulo ezintsha nge-AppImage | Kusuka ku-Linux
I-Firefox ne-LibreOffice: Uzisebenzisa kanjani izinguqulo ezintsha nge-AppImage
Ukufaka kwe-Linux Post | 13/05/2022 06:00 | Aplicaciones, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Uma sisebenzisa noma iyiphi ikhompuyutha, emsebenzini nasekhaya, 2 yezinhlobo ezibaluleke kakhulu nezisetshenziswa kakhulu zezinhlelo zokusebenza imvamisa Iziphequluli zewebhu nama-Office Suites. Okuyinto enengqondo ngokuphelele futhi esebenzayo, kusukela Umsebenzisi ojwayelekile wasekhaya noma wasehhovisi, ngokuvamile isebenzisa lezi ngokuqagela. Ukuphequlula nokulayisha, ukulanda noma ukubuka ulwazi. Noma, ukuze uvule, udale, ulungise futhi uphrinte amafayela amafomethi ahlukene ngezidingo nezimfuneko zakho.
Ngakho, izicelo like I-Firefox ne-Free Office ezinguqulweni zabo ezintsha, bavame ukuba phakathi kakhulu I-GNU / Linux kubaluleke kakhulu. Futhi ngenxa yale njongo, ukusetshenziswa ukufakwa kwamafayela ohlobo lwe-AppImage, njengoba sizobona ngezansi.
Izengezo ezihamba phambili eziyi-10 zokufinyelela iFirefox esezingeni eliphezulu nevikelekile
Futhi njengenjwayelo, ngaphambi kokungena esihlokweni sanamuhla mayelana nokusetshenziswa kwe I-Firefox ne-Free Office ezinguqulweni zayo ezintsha kakhulu, ngokusebenzisa amafayela ngefomethi ye-.AppImage, sizoshiyela labo abathanda izixhumanisi ezilandelayo zokunye okushicilelwe okuhlobene kwangaphambilini. Ngendlela yokuthi bangazihlola kalula, uma kunesidingo, ngemva kokuqeda ukufunda le ncwadi:
"IFirefox ivamise ukuba isiphequluli sewebhu esizenzakalelayo sabaningi, cishe yonke into evame ukwenziwa ku-inthanethi ku-GNU/Linux, kokubili ngomsebenzi kanye nokudlulisa isikhathi. Ngakho-ke, ukwazi ukuthi yiziphi izengezo noma izandiso (ama-plugin) akuvumela ukuthi ube nesiphequluli sewebhu esisheshayo, esisebenza ngezindlela eziningi, esikhiqizayo nesisebenza kakhulu kubaluleke kakhulu futhi siwusizo.". Izengezo ezihamba phambili eziyi-10 zokufinyelela iFirefox esezingeni eliphezulu nevikelekile
I-LibreOffice 7.3 ifika nenani elikhulu lentuthuko nezici ezintsha
1 IFirefox ne-LibreOffice: Izinhlelo zokusebenza ezibalulekile kunoma yikuphi ukusatshalaliswa
1.1 Kungani usebenzise izinguqulo zesimanje zezinhlelo zokusebenza ezithile ku-Distros endala?
1.2 Ungayifaka kanjani iFirefox usebenzisa i-AppImage?
1.3 Ungayifaka kanjani i-LibreOffice usebenzisa i-AppImage?
IFirefox ne-LibreOffice: Izinhlelo zokusebenza ezibalulekile kunoma yikuphi ukusatshalaliswa
Kungani usebenzise izinguqulo zesimanje zezinhlelo zokusebenza ezithile ku-Distros endala?
Umkhakha omkhulu wabasebenzisi uvamise ukuwusebenzisa I-Distros enokwesekwa Okunwetshiwe (LTS). Abanye, futhi ngokuqinisekile iningi, ngokuvamile banalo I-GNU / Linux Distros ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bayeke ukuthola izibuyekezo ezijwayelekile nezokuvikela. Ngaphezu kwakho konke, kwezinye izinhlelo zokusebenza ezibalulekile noma ezibalulekile, njengokuthi, I-Firefox ne-Free Office. Noma bawathola ngezikhathi ezikhulayo.
okuphoqa abaningi ukuba shintsha inguqulo noma ukusatshalaliswa, ukuze kutholwe okudingekayo izinhlobo ezibuyekeziwe yalezi zinhlelo zokusebenza nezinye eziningi. Nokho, kwabanye lokhu kungase kungabi lula noma kufiseleke, okungukuthi fuduka. Futhi ngenxa yalokho, kuyancomeka ukuthi bazame ukukwazi ukufinyelela lezi zinguqulo zesimanje nezamanje ngezindlela ezamukelekayo.
Kusukela, izinguqulo ezintsha noma zesimanje, ngokuvamile nikeza amandla amakhulu kakhulu yabo, kanye ukuhambisana okungcono kakhulu enamawebhusayithi namafayela ezinkampani zangaphandle. Okungukuthi izikhathi eziningi, zenziwa ngobuchwepheshe bokuphathelene nobuvaliwe.
Ngakho, kulo mkhakha wokugcina wabasebenzisi, nge i-distros endala o I-Distros enamaphakheji wesicelo akamuva, ukusetshenziswa kwe Amaphakheji we-AppImage yiyona ekahle. Ngoba, ifilosofi yayo yokuqashwa ingahlukaniswa njengephathekayo futhi ezimele yona ngokuphelele. Ngenkathi abanye bethanda Snap noma i-Flatpack, azikho kangako.
Ungayifaka kanjani iFirefox usebenzisa i-AppImage?
Ukufaka i- Isiphequluli sewebhu seMozilla Firefox ngefomethi ye-AppImage enguqulweni yayo yakamuva, okulandelayo kuyatholakala Isixhumanisi esisemthethweni se-AppImageHub Store. Noma ngokuqondile, kusukela kulokhu okunye isixhumanisi se-github.
Uma isilandiwe, futhi yabelwe imvume yokuyiqhuba njengokusebenzisekayo efayelini elisebenzisekayo, sizokwazi ukuba nenguqulo yalo yakamuva esemthethweni ngaphandle kwenkinga, siyenze ngokuchofoza kabili okulula kwegundane.
Ngokwesibonelo, esimweni sami siqu, ngizamile inguqulo yakamuva ezinzile ye Isiphequluli sewebhu seMozilla Firefox ngaphezulu kwe- Isistimu yokusebenza kusekelwe I-Debian 8 (ebizwa nge-Canaima 5) futhi isebenze ngaphandle kwenkinga, futhi ngokuphelele ngeSpanishi. Njengoba ubona ngezansi:
Ungayifaka kanjani i-LibreOffice usebenzisa i-AppImage?
Ukufaka i- I-LibreOffice Office Suite ngefomethi ye-AppImage enguqulweni yayo yakamuva, okulandelayo kuyatholakala isixhumanisi esisemthethwenil kusuka kuwebhusayithi ye-LibreOffice uqobo.
Isibonelo, esimweni sami somuntu siqu, ngihlole inguqulo yakamuva ezinzile ye I-FreeOffice Office Suite ngaphezulu kwe- Isistimu yokusebenza kusekelwe I-Debian 8 (ebizwa nge-Canaima 5) futhi isebenze ngaphandle kwenkinga, futhi ngokuphelele ngeSpanishi. Njengoba ubona ngezansi:
Futhi, ngizamile kokubili. Amafayela e-AppImage ngaphezulu kwe- Isistimu yokusebenza kusekelwe I-Debian 11 (eqanjwe i-MX-21) futhi isebenze ngaphandle kwenkinga, futhi ngokuphelele ngeSpanishi.
Ngamafuphi, ukuba nezinguqulo zakamuva nezibuyekeziwe ze "Firefox kanye LibreOffice" ku-GNU/Linux Distros esetshenziswa yiwo wonke umuntu, kungakhathaliseki ukuthi indala kakhulu noma yesimanje, ngokusebenzisa amafayela ku- Ifomethi ye -AppImageKuyinto esheshayo nelula. Futhi ngokuqinisekile, lokhu kuzovimbela, ngezinga elikhulu, i ukuphelelwa yisikhathi nokulahlwa kwabaningi I-GNU/Linux distros engasasekelwa futhi ayisabuyekezwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Firefox ne-LibreOffice: Uzisebenzisa kanjani izinguqulo ezintsha nge-AppImage
Ukwazi i-LibreOffice: Isingeniso ku-User Interface enkulu
Weron a VPN esekelwe kuphrothokholi ye-WebRTC